Ubuntu 20.04.2 LTS biara na Kernel 5.4, ihe ngosi ihe osise na ihe ndi ozo | Site na Linux
Daysbọchị ole na ole gara aga a mara ọkwa ntọhapụ nke akara mmelite nke abụọ nke Ubuntu 20.04.2 LTS, nke gụnyere mgbanwe metụtara nkwado ngwaike emelitere, Linux kernel na ndịna-emezi tojupụtara mmelite, installer na bootloader bug fixes.
Ọ gụnyekwara mmelite kachasị ọhụrụ maka ọtụtụ narị nchịkọta iji dozie nsogbu na nkwụsi ike, gbakwunyere n'otu oge a na-ewepụta mmelite yiri nke ahụ maka Ubuntu Budgie 20.04.2 LTS, Kubuntu 20.04.2 LTS, Ubuntu MATE 20.04.2 LTS, Ubuntu Studio 20.04.2 LTS, Lubuntu 20.04.2. , Ubuntu Kylin 20.04.2 LTS na Xubuntu 20.04.2 LTS.
Anyi aghaghi icheta nke ahu A na-eji nsụgharị LTS eme ihe dị ka ụdị nkwado nkwado na-aga n'ihu iji wepụta nsụgharị kernel na nke eserese eserese, nke a ga - akwado kernel na ndị ọkwọ ụgbọala ga - akwado naanị ruo mgbe ewepụtara Ubuntu LTS patch update ọzọ.
Ubuntu 20.04 LTS bu ezigbo ihe omuma weputara Linux 5.4 kernel, mbipute nke nwere ọtụtụ akụkọ dị mkpa na atụmatụ yana n'etiti ihe kachasị mkpa bụ nkwado maka ọtụtụ akụrụngwa (dịka AMDNavi 12 na 14 GPUs) na faịlụ faịlụ exFAT, dịka ọmụmaatụ.
Agbanyeghi na mmelite ohuru a, ekwuputara kernel Linux 5.8 ma kwado ya rue Ubuntu 20.04.3, nke gha enye Ubuntu 21.04 kernel. Na mbu ebuputara, ogwe kernel 5.4 ka aga akwado maka usoro mmezi nke afo ise.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara ìhè na Ubuntu 20.04 LTS bụ nkwado obodo maka WireGuard, Dị ka ndị dị otú a, ụdị Kernel 5.4 a etinyeghị ya dị ka atụmatụ, mana ọ bụ ruo Kernel 5.6, WireGuard nwere ike ịbanye na ụdị Kernel a. WireGuard bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma esi emeghe emeghe maka mmejuputa njikọ dị n'okpuru VPN.
Banyere ọnọdụ desktọọpụ nke sistemụ, anyị nwere ike ịchọta Gnome 3.36 na-eweta na ya a ọhụrụ imewe maka ngwa na nchekwa na usoro menu.
1 Banyere mmelite Ubuntu 20.04.2 LTS ọhụrụ
1.1 Etu esi melite mmelite Ubuntu 20.04.2 LTS ọhụrụ?
Banyere mmelite Ubuntu 20.04.2 LTS ọhụrụ
Versiondị a gụnyere ụfọdụ ndozi nke Ubuntu 20.10 nke anyị kwurula banyere ya, nke bụ Chọrọ nwelite ngwungwu na kernel mbipute 5.8 (kernel 5.4 ejiri ya na Ubuntu 20.04 na 20.04.1).
Banyere akụrụngwa nke ndịna tojupụtara, anyị nwere ike ịchọpụta na emelitere ihe ka ọtụtụ, gụnyere X.Org Server 1.20.9, libdrm 2.4.102 na Mesa 20.2.6, nke a nwalere na mbupute ọdịda nke Ubuntu 20.10. Agbakwunyere nsụgharị ọhụrụ nke ndị ọkwọ vidiyo maka Intel, AMD na ibe NVIDIA.
N'adịghị ka nsụgharị LTS ndị gara aga, ụdị nke kernel na eserese eserese ga-eji ndabara na nrụnye dị ugbu a nke Ubuntu Desktop 20.04, kama ịnye dị ka nhọrọ.
Imelite nke nsụgharị emelitere nke ngwugwu ka emekwara ka ọ pụta ìhè GNOME 3.36.8, LibreOffice 6.4.5, libfprint 1.90.2, snapd 2.46, ceph 15.2.7.
Maka usoro ihe nkesa, a na-agbakwunye kernel ọhụrụ dị ka nhọrọ na onye nrụnye, gbakwunyere na ọ bụ ihe ezi uche dị na iji mgbakọ ọhụrụ naanị maka nrụnye ọhụrụ: sistemụ arụnyere na mbụ nwere ike ịnata mgbanwe niile dị na Ubuntu 20.04.2 site na usoro ntinye melite.
A ga-amara ndị ọrụ nke ngalaba LTS ochie nke Ubuntu 18.04 na njikwa njikwa melite na ha nwere ike ịgbanwe na ngalaba 20.04.2.
Etu esi melite mmelite Ubuntu 20.04.2 LTS ọhụrụ?
Maka ndị nwere mmasị ma nọ na Ubuntu 20.04 LTS, ha nwere ike imelite sistemụ ha na mmelite ọhụrụ ewepụtara site na isoro ntuziaka ndị a.
Ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ Desktọpụ Ubuntu, na-emeghe ọnụ na sistemụ (ha nwere ike ime ya na ụzọ mkpirisi Ctrl + Alt + T) n'ime ya ha ga-ede iwu na-esonụ.
Ná ngwụsị nke nbudata na ntinye nke nchịkọta niile, ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa, anyị na-akwado ịmepepụta kọmputa ọzọ.
Ugbu a maka ndị ọrụ Ubuntu ihe nkesa, iwu ha ga-ede bụ ihe ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 20.04.2 LTS na Kernel 5.4 na-abịa, mmelite nhazi eserese, na ndị ọzọ
spaCy, ọba akwụkwọ nhazi asụsụ